Soo dejisan HomeBank 5.3 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware softwareHomeBank
Bogga rasmiga ah: HomeBank
العربية, English (United Kingdom), Українська, Français...
Faallo ku saabsan HomeBank
HomeBank Xirfadaha la xiriira
Bitcoin – macmiil caan ah si loo kasbado lacag qaali ah. Softiweerku wuxuu adeegsadaa shabakad khaas ah xawaaladda aaminka ah iyo xog siinta.
Dia – barnaamij softiweer ah oo lashaqeeya qorshayaasha heerarka kala duwan ee dhibaatooyinka. Sidoo kale, waxay taageertaa isugeynta waxayna ku shaqeysaa lakabyo.
Mp3tag – softiweer si aad wax uga beddesho calaamadaha qaababka codka ee kala duwan. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu beddelo macluumaadka ku jira feylasha asalka ah.
Studio-ga Sawirka Guryaha – oo ah istuudiyaha sawir gacmeed oo leh qalab badan oo wax ka badal ah, saamaynta, iyo miirayaal kala duwan oo lagu farsameeyo sawirrada dijitaalka ah iyo sawirrada garaafka.